The wife of the President of Zimbabwe was suspended from all posts in the ruling party – Russia news today
The wife of the President of Zimbabwe was suspended from all posts in the ruling party
© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiЖена, President of Zimbabwe, grace Mugabe. Archival photo © AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
The Central Committee of the ruling party «Zimbabwe African national Union — Patriotic front» (ZANU PF) at the special meeting dismissed grace Mugabe, wife of the incumbent Robert Mugabe, from all his posts in the party ZANU PF, said in a resolution adopted at the meeting.
On Wednesday, the military took control of the television station in the capital of Zimbabwe, Harare, and the residence of President Mugabe. Mugabe in a telephone conversation with his counterpart of South Africa Jacob Zuma confirmed that the military is holding him under house arrest.
It was also reported that the wife and probable successor of President grace Mugabe fled the country, and dismissed Vice-President Emmerson Mnangagwa has returned to the capital to lead the government. Earlier, eight of the ten provincial coordinating committees of the party (PCC) called on Mugabe to resign as President, and the President and first Secretary of the party.